Lefitry ny distrikan’i Brickaville: « Tsy marina ny filazana fa karohin’ny fitsarana aho” | NewsMada
Par Taratra sur 07/02/2020
Namaly ny lahatsoratra nivoaka an-gazety ny 31 janoary teo ny lefitry ny distrikan’i Brickaville, Raharisoamanan Aurélia. Nambarany tamin’izany fa tsy mitombina ary tsy marina ny fikarohana azy sy ny ambara fa fanodinkodinam-bola nataony.
Tonga teto amin’ny foiben’ny gazety Taratra ny lefitry ny distrikan’i Brickaville nanamafy fa tsy nandositra ary tsy karohina izany ny tenany. “Tsy fanodinkodinam-bolan’ny Ceni, mitentina 24 970 000 Ar izany, no nitorian’ny sefo fokontany ahy. Tsy afa-po amin’ny fampiakarana ny raharaha eo anivon’ny fitsarana izy ireo fa mbola narahiny fanalam-baraka sy hoso-potaka amin’ny fampielezana vaovao tsy marina izany”, hoy izy. Nanteriny fa saropady ny asan’ny Cen, indrindra ny momba ny vola, ka nahagaga azy ny nahazoan’ireo nanenjika azy io totalim-bola io.
Tsy nipoitra teny amin’ny fitsarana
Etsy andaniny, nohamafisiny fa tsy marina koa ny filazana ny amin’ny fampiantsoan’ny mpitsara mpanao famotorana io lefitry ny distrika io ary nambara tamin’izany fa tsy nipoitra niatrika izany. “Nohafaran’ny mpitsara ho tonga teo anatrehan’ny fitsarana ny vavolombelonay, ny alarobia 29 janoary 2020, fa tsy nisy intsony ny fiantsoana tamin’io andro io. Maro ny olona nahita izany raha tonga nanatitra ny vavolombelona tao amin’ny fitsarana ao Toamasina izahay. Tao koa ireo mpitory…”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, tsy nahafaly ireo mpitory ny fahombiazan’ny mpikamban’ny CED Brickaville, indrindra fa ny “chef d’antenne”, sady lefitry ny distrika tamin’ireo fifidianana efatra nifanesy, nokarakarain’izy ireo, araka ny nambarany. “Tsy nampitsanga-menatra ny minisiteran’ny Atitany sy ny Ceni ny asa nataonay “chef d’antenne” ka anisan’ny antony hanenjehana sy handotoana anay izany”, hoy izy.
Fankahalana na ady toerana
Nohitsiny fa te hisolo toerana azy ireo olona ireo ka mitady ny fomba haminganana sy hanaratsiana ny fomba fiasa ary miafara amin’ny famoronana resaka tsy mitombina tahaka izao. “Anisan’izany ny ambara fa fivarotana ny tanin’ny sampandraharahan’ny Mponina sy ny fanomezana avy amin’Ambatovy…”, hoy izy. Mbola nametra-panontaniana izy ireo ny amin’ny vaovao hoe nidoboka am-ponja ny filohan’ny CED nefa ambara fa mirenireny ao Toamasina. “Tsy mazava koa ny filazana fa anaovan’izy ireo kolikoly”, hoy ny fanambany.